I-China Cast iron frame model ED10 engine block Manufacture and Factory |Zhengheng
Imodeli ye-Cast iron frame ED10 injini block
Igama lomkhiqizo: Framework
Imodeli: ED10 ngaphansi kohlaka
Imodeli yohlelo lokusebenza: Iloli leveni elikhulu le-Great Wall Wind Jun, iloli elithwala isibhamu iGreat Wall
Imininingwane yokupakisha: ukupakisha komuntu ngamunye + ibhokisi le-laminate;215cm * 185cm 20 izingcezu / icala
Izinto zokubumba zesihlabathi zohlaka
Insimbi encibilikisiwe yokusakazwa kwe-Framework
Uhlaka ngemva kokusakazwa kwezinto zenqubo
Impahla yomkhiqizo: HT300
Isisindo somkhiqizo: 21KG
Usayizi womkhiqizo: 380*400*270.5
I-cast iron Framework ekhiqizwe ngu-Zhengheng Power isetshenziselwa i-Great Wall picard feng Jun kanye nochungechunge lwezibhamu ze-Great Wall.Uhlaka luyingxenye exhunywe phakathi kwebhulokhi yesilinda senjini nepani likawoyela.Idlala indima yokusekela i-crankshaft nokuvala ingxenye engezansi ye-cylinder block.
Umkhiqizi ochwepheshe wohlaka lomzimba wamasilinda ovela e-China, sithengisa imikhiqizo yekhwalithi ephezulu, ngokusho kwemidwebo yohlaka ucwaningo oluhlangene nokuthuthukiswa nokukhiqiza, sinokusekela okuchwepheshile kwezobuchwepheshe kanye neqembu eliphelele lenkonzo yangemuva kokuthengisa, elinokukhiqiza nokuphatha okuphrofeshinali, ukukhiqizwa okuthuthukisiwe. imishini, ukuqinisekisa izinga lethu kanye nesikhathi sokulethwa, inkampani yenza isimiso sokholo oluhle, izinga eliphezulu, ukusebenza kahle okuphezulu.Siyaqinisekisa ukuthi inkampani izozama ngakho konke okusemandleni ethu ukunciphisa izindleko zokuthengwa kwekhasimende, ukunciphisa umjikelezo wokuthenga, ukusimamisa ikhwalithi yomkhiqizo, ukuthuthukisa ukwaneliseka kwamakhasimende, kanye nokuzuza isimo sokuwina.Bheka phambili ekusebenzeni nawe!
1. Sigxila kugobolondo, uhlaka, izingxenye zesakhiwo kanye nazo zonke izinhlobo zensimbi ecijile, izingxenye ze-aluminium eziphonsiwe, neminyaka eminingi yocwaningo kanye nesipiliyoni sokukhiqiza ukuthuthukiswa kanye nokuqoqwa kwemboni.
6. Ngesikhathi esifanayo, sinemboni yokukhipha kanye nemboni yokucubungula umshini, ukuhlinzeka ngemikhiqizo eqediwe eyodwa-stop kusuka kusikhunta, ukubunjwa nokucubungula.
1. Ukupakishwa kwangempela: 1PC/piece, 30 izingcezu/ibhokisi (ubuningi buncike kumkhiqizo);Ukupakisha kwepulasitiki + ibhokisi lokuthekelisa laminate
1. Ukupakishwa okujwayelekile kokuthekelisa, ukupakisha okuqinile ukuze kuqinisekiswe ukuthunyelwa kwemikhumbi okude nokucaciswa kwamanye amazwe.
Sinabasebenzi abangochwepheshe bokulungisa izimpahla, ukupakisha nokupakisha ukuze baqinisekise ukulethwa ngesikhathi nokupakisha okuqinile.
1. Indawo yohlaka: Uma kukhona uhlu, ngokuvamile izinsuku eziyi-15-20 ngemuva kokuthola inkokhelo ingalethwa.
2. Ukwenza ngokwezifiso uhlaka: amasampula azolethwa phakathi kwezinsuku ezingama-30-65 ngemuva kokuthola imidwebo esemthethweni.(Kuya ngomkhiqizo othize)
4. Ukuthengwa okukodwa kwezingxenye zensimbi ezisansimbi, izingxenye ze-aluminium enziwe ngensimbi kanye nezindlu ezincishisiwe ukuze kukusize unciphise izindleko zokuthenga izingxenye.
5, ukuhlinzeka ngemikhiqizo yekhwalithi, isevisi yekhwalithi, intengo yokuncintisana nokulethwa ngesikhathi.Imikhiqizo yethu idayisa kahle kokubili ekhaya naphesheya.Inkampani yethu ilwela ukuba ngomunye wabahlinzeki ababalulekile eChina.
Umgomo wethu "ubuqotho kuqala, ikhwalithi kuqala".Siyaqiniseka ukukunikeza isevisi izinga kanye nemikhiqizo ekahle.Sithemba ngobuqotho ukusungula ukubambisana win-win ibhizinisi nawe esikhathini esizayo!
Okwedlule: I-7H injini ye-diesel head cylinder head
Olandelayo: Ibhulokhi yenjini ye-Aluminium H15T
I-1kd Engine Block
I-1kd Engine Cylinder Block
I-2kd Engine Block
I-2kd Engine Cylinder Block
I-2tr Engine Block
I-2tr Engine Cylinder Block
I-350 Engine Cylinder Block
I-3d Printed Engine Block
I-3d Printing Gasoline Engine Cylinder Block
I-3sz Engine Block
I-3sz Engine Cylinder Block
4d56 Injini yokuvimba
Ifeni yenjini enezingxenye ze-aluminium